Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAnkica
Xa iyi-54 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
I-Apartment isembindini wesixeko, ijikelezwe yimivalo kunye neendawo zokutyela. Indawo yabahambi ngeenyawo ingaphaya kwesitrato kwaye indlela yokuhamba ecaleni komlambo yimizuzu emi-5. Ukuze kube lula kuwe kukho ivenkile enkulu kwisakhiwo.
Impembelelo enamandla yoyilo oluncinci kunye nokusebenzayo lukhona kwigumbi, ngokubhekisele ngokucacileyo kulwimi loYilo lwaseScandinavia. Inika intuthuzelo ekhethekileyo kunye nokonwaba okubonakalayo okumnandi. Sinikezela ngeTV yekhebula yasimahla enezitishi ezingaphezu kwe-100+ ngolwimi lwaseSerbia nesiNgesi, iitshaneli zomculo kunye noqhagamshelo lwe-intanethi lwasimahla kuzo zonke iimfuno zakho. Ikwapakishwe nazo zonke izixhobo zombane ezitsha zombane ukwenza ukuhlala kwakho kungabinaxhala (umatshini wokuhlamba izitya, ukuhlamba kunye nokomisa iimatshini, imicrowave, njl..).
I-wifi ekhawulezayo – i-54 Mbps
ILux Studio Apartment Vidanovic ibekwe kumbindi wePirot, ijonge indawo yabahambi ngeenyawo ezaliswe ziibhari, iikhefi, iivenkile kunye neevenkile ezinkulu. Kusembindini wesixeko ngokusondeleyo kwinkulungwane ye-14 yeOld Pirot Castle, kunye neendonga zomlambo iNisava River.
Umbuki zindwendwe ngu- Ankica